စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဒီဇင်ဘာ ရုံးပိတ်ရက်များ အတွက် အဘိဓမ္မာ ရက်တို အထူး သင်တန်း (ဒုတိယပိုင်း) - MyanmarAds
FREE advertising for Myanmars
စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဒီဇင်ဘာ ရုံးပိတ်ရက်များ အတွက် အဘိဓမ္မာ ရက်တို အထူး သင်တန်း (ဒုတိယပိုင်း)
(ပထမပိုင်းလဲ အနဲငယ်ပြန်သင်ပေးပါမည်။ ပထမပိုင်း မမှီသူများ အောက်တွင်ပါသော ဗီဒီယိုကြည့်၍ ကြိုတင်လေ့လာထားနိုင်ပါသည်။)
Please register now!!!!
စာရင်းပေးထာသော ကျောင်:သား စုစုပေါင်း = 395
Student list updated on 10/12/2013
စင်္ကာပူမှာ ရှိနေကြတဲ့ သူတော်ကောင်းတို့..
- မိမိတို့ လက်ရှိ ဘဝမှာ သာသနာနဲ့ ကြုံကြိုက်နေခိုက်၊ အဘိဓမ္မာ စာပေကို ထိရောက်အောင် သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေ ထင်ရှားနေခိုက်၊ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ အဘိဓမ္မာများကို မိမိတို့ရဲ့ ဘဝသံသရာ အဆက်ဆက်မှာ အထုံအဆက်ပါသွားအောင် နားလည်သည်ဖြစ်စေ၊ နားမလည်သည်ဖြစ်စေ ဆရာကောင်းနဲ့ ကြုံကြိုက်တုံး ကြိုစားပြီး လာတက်စေချင်ပါတယ်…
- နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော ခက်ခဲလှတဲ့ ဓမ္မစရိယစာမေးပွဲမှာ စာသင်သား သံဃာတွေကို Whole Burma First, Second အထိရအောင် ထိရောက်စွာ သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့၊ စာသင်ရာမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်မှ ဆရာတော်ကြီး ကိုယ်တိုင် သင်ကြားပေးမဲ့ ယ္ခု အဘိဓမ္မာ ၅ရက် သင်တန်းကို ကြိုးစားပြီး လာတက်စေချင်ပါတယ်..
Buddhism is an education based religion. Please learn and practise as much as you can while there are teachers around you. Learning isaonly way to sustain our Buddhism for longer period of time. Please do not leave this task for learning of Tipitaka to monk alone. We try our best to let Buddhism knowledge to flow through our body and mind. Please try your best effort to learn in depth knowledge of Buddhism through teaching and learning approach.
သင်တန်း နေ့ရက်၊ (စုစုပေါင်း ၅ရက်)
အသေးစိပ်ကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ http://dhammadownload.com/dhammadownload-news-Bhaddanta-Thucitta-Bhivamsa-14Dec2013.htm
ပထမပိုင်းကို အနည်းငယ် ပြန်လည်သင်ကြားပေးပါမည်။ ပထမပိုင်း မတက်လိုက်ရသော သင်တန်းသားများသည် အဘိဓမ္မာသင်တန်း စာအုပ်ကို download ရယူ၍ အောက်ဖေါ်ပြပါ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ဗီဒီယိုများကို ကြိုတင် လေ့လာထား၍ ဒုတိယပိုင်းကို ဆက်လက် သင်ကြားနိုင်ပါသည်။
နံနက် ၈း၃၀မှ ညနေ ၅နာရီ
Yeos Building ,2Telok Blangah Street 31, Singapore 108942 near (Telok Blangah MRT)
- သင်တန်းသားများထိုင်နိုင်ရန် ထိုင်ခုံများ စီစဉ်ပေးပါမည်။
- သင်တန်းကြေး အခမဲ့
- နေ့လည်စာနှင့် Coffee Break အတွက် အစား အစာများ စီစဉ်ထားပါသည်။
အောက်ပါ အချက် အလက် များကို [email protected] သို့ ပေးပို့ခြင်းဖြင့် စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
(၁) သင်တန်း အမည်။ အဘိဓမ္မာ ရက်တို အထူး သင်တန်း (ဒုတိယပိုင်း)
(၂) သင်တန်းသား အမည်
(၃) ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
(၄) ဆက်သွယ်ရန် အီးမေး လိပ်စာ
မှတ်ချက်။ စင်္ကာပူ နိုင်ငံ အဘိဓမ္မာ (၅) ရက် သင်တန်းကို တက်ရောက်ဖို့ဆန္ဒရှိပေမဲ့ စနေနေ့ ရုံးတက်ရသဖြင့် ၅ ရက်စလုံး မတက်ရောက်နိုင်သူများသည် မိမိတို့ တက်ရောက်နိုင်မည့် နေ့ရက်များကို ဖေါ်ပြ၍ စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ နေရာထိုင်ခင်းသည် ကျယ်ဝန်းသဖြင့် အဆင်ပြေသော်လည်း အစားအသောက် စီစဉ်သူများ၏ အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ စာရင်းပေးသွင်းမှုကို လက်ခံ သွားပါမည်.. တရက်ရသည်ဖြစ်စေ..နှစ်ရက်ရသည် ဖြစ်စေ လာရောက် သင်ကြားရင်းဖြင့် အဘိဓမ္မာကို စိတ်ဝင်စားသွာမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်..
"စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဒီဇင်ဘာ ရုံးပိတ်ရက်များ အတွင်းကျင်းပသော အဘိဓမ္မာ ရက်တို အထူး သင်တန်း (ဒုတိယပိုင်း) အတွက် စာရင်းပေးထားသော သင်တန်းသား/သူ များ စာရင်း"
1 Naing Aung
2 U Htay Kywe
4 Shwe Zin Htike
6 Aye Win Htay (Ms)
7 Nay Kyi Myint
8 Cho Mar Zin
9 Wint Shwe Yi Tun
10 Zar Zar Win
11 Khin Hnin Hnin Lae
12 Ma May Zin
13 Zar Zar Htun
14 Ma Nayzar Minn
15 Mon Myat Thu
17 Khin Myat Thet Win
19 Ma Tin Nilar Soe
21 Hlaing Hlaing New
22 thi thi oo
24 Min Naing
25 Tin Tin Aye
27 Daw myint Than
28 Lwin Wah Wah Hlaing
29 Zar Chi OO
32 ဒေါ်ခင်မြ - Daw Khin Mya
33 Mar Lar
34 Kyaw Kyaw Naing
35 Maw Zin
36 Daw Tint Tint Win
37 Daw Myint Myint Yee
38 San San Moe Shein
40 Myo Aung
41 Eve Phyu Htun
42 Khin San Oo
43 khin Myo Thant
44 May Phyu Thaw
46 HNIN HNIN MAW
47 Aung Ko Oo
48 Myo Min Thein
49 Khin Maung Lwin
53 U Kyaw Nyunt
54 Daw Toe Yee
56 Ma Nwe Ni
57 Khine Zin Tun
58 San Myat Tun
59 Myat Nan Aye
60 Ma Thu Zar Htwe
61 Ma Aye Aye Yi
63 Kyi Lin
64 U San Lwin
65 Daw Yi Yi Myint
66 Aye Aye Cho
67 Kyaw San Min
68 Thin Thin Yu
69 Daw Htay Htay Win
70 Daw Htwe
71 U Aung Yin
72 Daw Kyi Kyi Than
73 Khin Su Su Aung
74 Khin Mar Thu
75 Daw Htwe
76 U Aung Yin
77 Daw Kyi Kyi Than
78 Daw Su Inn
79 Linn Linn Thein Maw
81 Moe Moe Kyaw
82 Thida Khin Saw
83 Hlaing Win Htun
84 Ko Hlaing Win Htun
85 Ma Phyo Phyo Khine
86 Daw Khin Mar Lay
87 Daw Hla Win Kyi
88 Ma Ni Ni San
92 Theingi Lin
94 Hsu Myat Win
98 Ma Win Yu Lwin
99 Ma Khin Ma Lay
103 KHIN EI EI THEIN
104 U Tin Soe
105 Daw Tin Tin Yee
106 Aye Aye Min
107 Myo Myo Thwe
108 Thinn Thinn Thwe
109 Mon Myat Thu
110 Saw Saw Khine
111 Moe Thidar
112 Kyi Thein
113 Khin Lei Wah Win
114 Shwe Zin
115 Khaing Min Aung
120 Kyaw San Bo Htay
122 Hain Htet Aung
123 Zaar Ni Lwin
124 Win Mar Tun
125 Toe Toe Yi
126 Ma Htay Htay Myint
127 Naing Linn Tun
128 Phyo Ei Khin
129 Naw Khin Mar Wai
130 Aung Htun Win
131 Nyo Nyo San
132 Ma Yu Yu Lwin
133 Aye Sandar
134 Ma Soe Win Maw
135 Ma Phyu Phyu Khin
137 Mya Theingi
138 Daw Yee Yee Hmwe
139 Mya Mya Htay
140 Tin MarLar Oo
141 Theint PaPa Aye
142 Than Zaw Oo
143 Myint Myint Win
146 Hay Mar Aung
147 YU WAR KYI
148 Thida Win
149 Ei Khaing Win
150 Hla Myint Zu
151 AYE KHINE KHANT
153 Zin Zin Aung
154 Nwe Ni Khin Maung
155 Ei Mon Tar
157 Daw Hla Hla Maw
158 U Myint Aung
159 Ms Pyae Pyae Phyoe
160 Si Thu Win
161 Phyo Yu Swe
164 Thet Mon Oo @ thin theit theit soe
167 MA THUZAR LWIN
168 MAR MAR THET
169 MI KHIN SAN MON
170 Zaw Min Naing
175 Myo Thet Lynn
176 Than Soe
177 MINN THIHA
179 Saw Myint Thwe
180 Ma Khaing Kyaw Win
181 Ma Khaing Khaing Win
182 Ma Khine Su Latt
183 Ma Aye Aye Han
186 Daw Khin Than Nyunt
187 Ma Aye Mya Thida Thwin
188 Shwe Zin Aye
189 Aye Aye Myin
190 U Myint Oo
191 San San Aye
192 Daw Khin San Yu
194 Engyin Htun
195 Htein Lynn (Phoe Toe)
196 MS YE YE SAW
198 Nann Lwin Oo
199 Than Than Htay
200 Khin Khin Lay
205 Khin Thandar Myint
210 Kyaw Wint Thu
211 U Maung Maung
212 Daw Lei Lei Win
213 Win Hlaing
214 Myitzu Ohn
215 U Khin Maung Myint
216 U Aung Kyaw Oo
218 MA SAN SAN AYE
219 Thiri Tin Oo
220 Wint Thu Thu Lin
221 Zin Nwe Wint Htay
222 Daw Khin Khin Htwe
223 Min Thu
227 U Aung Min
228 Ko Nyunt Win Bo
232 Phyu Phyu Mar Yi Lwin
233 Thin Thant Aye
235 Nay Aung Kyaw
236 Thiri Win
237 Daw Khin win Maw
239 Ma Htay Htay Yee
244 Aye Aye Soe
245 Zin Mar Than Win
246 Minn Htut
247 Su Su Kyi
248 Minn Ye Htet
249 U Win Kyi
250 Phyo Si Thu
251 Daw Aye Aye MAW
252 Wai Lynn Naing
253 Daw Cho Cho
254 MI MI AYE
255 THEIN THEIN LWIN
256 မ၀ါဝါမျို @ WAH WAH MYOE
257 Ma Thin Thin Zin
258 Ma Noe Noe Yin
259 Ma Nan Nu Nu Lwin
260 Ma Aye Aye Han
261 Khin Myo Aye
262 Hnin Hnin Yu
Latest news, useful information
Attractions, Beautiful places in Singapore
Useful links, Blog links & Government website links
Home | About Us | Contact Us - Sites: Yangon, Singapore
Copyright © MyanmarAds. All rights reserved. Developed by SearchMyanmar Group.